‘Hongu takamugadzirisa’ | Kwayedza
21 Jun, 2014 - 00:06	 2014-06-21T19:57:57+00:00 2014-06-21T00:00:38+00:00 0 Views
IMWE hama yaCollins Chigariro, iyo iri kunetsekawo nekurwara kusiri kupera kwemurume uyu, VaEverson Chigariro (35), vakatsinhira kuti mukoma wavo anoti akagadzirwa nevanhu vaakabira zvinhu zvavo. “Collins anonzi akataura kuti kuzvimba kwedumbu nemakumbo ake aiva agadzirwa nevanhu vaakabira zvinhu zvaisanganisira magumbeze, mapoto, ndiro nezvimwewo,” vakadaro VaChigariro.
Murume akangozviti anonzi Itai, uyo anoti anogara kumwe cheteko naCollins, akati akabirwa zvinhu zvake nemurume uyu ndokutiwo ichokwadi kuti vakafamba kuchivanhu vachitsvaga mhiko dzekupfidzisa mbavha yainge yavabira.
“Ehe, takafamba tabirwa ini nehanzvadzi yangu tikagadzira. Hamheno kuti ndiye here akatibira nekuti haasi kuuya kuzodura kwatiri kuti timutsikinure. Asi kana achiuya kwatiri tinoda kuona zvinhu chaizvo zvatakabirwa, kwete
‘Hongu takamugadzirisa’ zvekungotaura,” akadaro murume uyu.
VaTito Nyamweda (35), avo vanova hama kumhuri mbiri idzi, yekwaChigariro neyevanoti vakabirwa, vanoti nyaya yekuti Collins akagadzirwa nemishonga apo akaba vakainzwa.
“Inyaya inozivikanwa nevanhu vari pedyo nemhuri iyi kuti Collins anonzi akaba zvinhu zvevanhu zvinova zvave kumurwarisa,” vakadaro VaNyamweda.
Vamwewo vakapa pfungwa dzavo panyaya iyi.
Eugine Shayanewako (28) anoti: “Vanhu vanotaura zvavanenge vachinzwa, nyaya yemurume uyu yakabvira kare kutaurwa asi hatizive kuti kuvengwa here kunoita kuti agare achinzi anoba.”
Anoti vanhu vanomunongedza achinzi imbavha kana kuchinge kwangoshaikwa zvinhu munharaunda yavo.
VaCleopas Munemo (34) vakataurawo. “Ini ndinobvawo kuMhondoro padyo nemusha wemurume uyu, anongonzi anoba. Saka zvehurwere hwake kuti kuba here kana kuti imwewo nyaya hatizive asi mbiri yake ndeye kutora zvisiri zvake,” vakadaro VaMunemo.
Munyaradzi Motsi (30) akatiwo: “Inyaya dzinongotaurwa kuti anoba, vamwe vachiti akagadzirwa kurwara uko ari kuita. Asi chandinoziva ini ndechekuti akamborwara zvikuru akanzi agare achinwa mapiritsi, izvo akambomira kuita ndokubva atanga kurwara.”
Collins paakataurwa naye neKwayedza akatiwo kwavakambofamba kuchivanhu vakataurirwa kuti aiva agadzirwa nemishonga.